« Star Tour Mahajanga » : nampitsinjaka ny rehetra i Jaojoby | NewsMada
« Star Tour Mahajanga » : nampitsinjaka ny rehetra i Jaojoby
Nisy ny seho natokana ho an’ireo tanora kokoa… Tsapa kosa anefa fa tena ho an’ny rehetra ny fampisehoana natolotr’i Jaojoby sy ny tariny, ny alin’ny asabotsy teo, teto amin’ny Bord Mahajanga.
Tsy tongatonga ho azy izany safidy izany, fa tena nandrasana tamin’ity mpanjakan’ny salegy ity mihitsy io tolotra io. Vao niaka-tsehatra, nampiditra ny saleginy araka ny nahafantarana azy avy hatrany i Jaojoby. Nifandimby ireo hira taty aoriana sy ireo efa taloha, toa ny “Malemilemy”, “Mangala viavy”, “Velogno”, “Tsy hirenireny”, “Samy mandeha, samy mitady”, sns. Teo koa ny hira izay nanehoany fa tsy salegy ihany ny mozika lalaovin’i Jaojoby.
Efa fanaon’ny mpanjakan’ny salegy rehefa amina sehatra lehibe toy ny “Star Tour” koa ny mamela ny sehatra ho an’ireo mpanara-dia azy, toa an’i Anderson Jaojoby zanany, sy ny vadiny izay lehiben’ny tarika Saramba rahateo.
Nankafizin’ireo tanora kokoa ny G5
Zava-baovao nandritra ny “Star Tour” ihany koa ny fandraisana anjaran’ny tarika G5, ilay nivoaka tao anatin’ny fifaninanan-kira nokarakarain’ny fahitalavitra iray. Sedra voalohany ho azy dimy lahy, satria sehatra goavana voalohany natrehiny. Tsapa ny tahotra kely tany am-boalohany, saingy vetivety dia nahafehy ny sehatra izy ireo. Anisan’ny nampihorakoraka ireo tanora marobe ny nanaovan’ny G5 ilay hira malaza maneran-tany amin’izao fotoana izao, “Despacito”. Na izany aza, mbola misy lesoka azo hatsaraina tsara ihany eo amin’ity tarika ity?
“Ambiance” hafa mihitsy koa ny teny amin’ny sehatra faharoa. Nahazo laka ireo tia mihira sy manala azy amina “karaoke”. Saika ireo “tanora zokiny”, araka ny fitenenana malaza no nameno ity toerana ity. Tsy tapaka olona ihany koa ny sehatra ho an’ny ankizy, amin’ny maha fetim-pianakaviana ny “Star Tour”.
Ny asabotsy, nisy ny “carnaval” lehibe, notontosaina teto an-tampon-tanànan’i Mahajanga. Naka ny lokon’ireo vokatra Star izany, kanefa nahitana koa ny fandraisana anjaran’ireo mpisehatra marobe. Anisan’ny nisongadina ny ekipan’ny fiadidiana ny Tanàna, notarihin’ny ben’ny Tanàna izay nanao fanamiana mitovy amin’ny an’ireo mpamonjy voina.
Tsy tapaka fialamboly na ireo teny amin’ny Bord na ireo nisafidy ny torapasika teny amin’ny Grand Pavois ny maraina sy ny antoandro.